6 ENIG ကုသမှု 1oz နှင့်အတူအလွှာတင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ PCB ul ရှန်ကျန်းအတွက် IPC လမ်းညွှန်ချက်များရိုးရှင်းသော Panel ကို FR4 1/1/1/1/1 / 1oz PCB ထုတ်လုပ်သူစာရင်းပေါက်အားလုံးအလွှာ - တရုတ်နိုင်ငံ6ENIG ကုသမှု 1oz နှင့်အတူအလွှာတင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ PCB ul ရှန်ကျန်းပေးသွင်းအတွက် IPC လမ်းညွှန်ချက်များရိုးရှင်းသော Panel ကို FR4 1/1/1/1/1 / 1oz PCB ထုတ်လုပ်သူစာရင်းပေါက်အားလုံးအလွှာ,စက်ရုံ -WMD
6 ENIG ကုသမှု 1oz နှင့်အတူအလွှာတင်းကျပ်ဘုတ်အဖွဲ့ PCB ul ရှန်ကျန်းအတွက် IPC လမ်းညွှန်ချက်များရိုးရှင်းသော Panel ကို FR4 1/1/1/1/1 / 1oz PCB ထုတ်လုပ်သူစာရင်းပေါက်အားလုံးအလွှာ
109*222မီလီမီတာ / 5pcs
6အလွှာ ENIG finish ကို
6 အလွှာ PCB, ပစ္စည်း FR4 ဖြစ်ပါသည်, Tg135, အထူဖြစ်ပါသည် 1.6 mm ± 0.1 မီလီမီတာ , ကြေးနီ 1/1/1/1/1 / 1oz ဖြစ်ပါတယ်ပြီးဆုံး, မျက်နှာပြင်ကုသမှု "ENIG 1U ဖြစ်ပါသည်, အင်္ဂါရပ် ENIG ကုသမှုနှင့်အတူ 6-layer ကို multilayer ဘုတ်အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့အများကြီး Finish လုပျနိုငျ, ပူပြင်းတဲ့လေထု level ဂဟေဆက် (သံဖြူ / ခဲနှင့်ခဲအခမဲ့ဂဟေဆက်), Electroless Emmersion နီကယ် / နှစ်မြှုပ်ခြင်းကိုရွှေ,hard ရွှေသင်းကျစ်ပြား,ရွှေ tabs များ, နှစ်မြှုပ်ခြင်းငွေ။, ကာဗွန်ခံနိုင်ရည်မှင်. Peelable မျက်နှာဖုံး. ENIG Plus အားရွှေလက်ချောင်းများပုံမှန်မျက်နှာပြင်ကုသမှုဖြစ်ပါသည်.
WMD IPC လမ်းညွှန်ချက်များပေါ်တွင်အခြေခံနှင့် ISO-9001-2008 နှင့် RoHS စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်နာကုန်ထုတ်လုပ်မှု.
1 PCB လူမီနီယမ် PCB သတ္တု PCB နဲ့ LED တိုက်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့နဲ့ LED PCB နဲ့ LED Lighting Layer
2L ကို Flexible ဘုတ်အဖွဲ့ 0.25mm ENIG 1oz PCB အမြင့် Precision PCB
ul အတည်ပြု4အလွှာ RoHS ကိုက်ညီအပြာရောင်မှင်တင်းကျပ် PCBs Multi-layer ကိုပျဉ်ပြား.